China DLZ-420/520 Solosaina mandeha ho azy mitohy mihinjitra thermoforming banga fonosana milina mpanamboatra sy ny mpamatsy |INCHOI
DLZ-420/520 Solosaina mandeha ho azy mitohy mihinjitra thermoforming vacuum fonosana milina
Izy io dia fitaovana famonosana mandeha ho azy izay misy ny thermoforming, vacuum (fisondrotry ny rivotra), famehezana hafanana, fanodinana, fanapahana, fanangonana ary fampitana.
MODELY Sakan'ny sarimihetsika ambony Undersakan'ny sarimihetsika Vacuum diplaoma Rivotra voaporitra herin'aratra fahefana Lanja manontolo lafiny
DLZ-420 397 mm 424mm ≤200pa ≥0.6MPa 380V50HZ 14KW 1800 kg 6600 × 1100 × 1960 mm
DLZ-520 497 mm 524mm ≤200pa ≥0.6MPa 380V50HZ 16KW 2100 kg 7600 × 1200 × 1960 mm
2.Under sarimihetsika mialoha fihenjanana positioning fitaovana
3. rafitra fanandratana
4. Cross cutter fitaovana
5.Servo coding rafitra
6. Upper Film mamorona fitaovana
7. Fanodinana fako
8.Electrical kabinetra fivoriambe sary
Ny fitaovana dia mety indrindra ho an'ny: steak, saosisy natono, saosisy ham, saosisy crispy, tongotr'akoho, atody papelika, tofu maina, vokatra trondro, vokatra hen'omby, vokatra zanak'ondry, saosy soy, voankazo maina, fromazy, singa elektronika, vokatra metaly ary vokatra hafa mila fonosana banga.
304 Stainless vy rafitra rafitra
1. Ny rafitra dia manana hery avo sy fanoherana ny harafesina.Ny lavaka visy amin'ny toerana raikitra tsirairay dia karakarain'ny laser avo lenta amin'ny fotoana iray mba hiantohana ny fahamarinan'ny fivoriambe ary hahatonga ny milina manontolo hihazakazaka tsara.
2. Ny fanitarana bebe kokoa, rehefa mila havaozina ny endrika fonosana, dia azo ampiana ny ampahany manan-danja amin'ny fotoana rehetra araka ny fepetra takian'ny fonosana.
Fitaovana fanandratana fampifandraisana efatra-axis
1. Ny fitaovana fanandratana dia vita amin'ny 6061 aviation aluminium firaka, izay mampitombo ny fahamarinan-toerana sy ny tanjaky ny singa.Ny kojakoja sliding dia mampiasa bearings linear avo lenta avo lenta avy any ivelany, izay marina amin'ny toerana misy azy ary miorina amin'ny asa.Ny haavon'ny fanandratana dia azo amboarina tsy misy dikany araka ny hatevin'ny fonosana vokatra.Raha tsy manova ny hafainganam-pandehan'ny hazakazaka, dia nohafohezina ny halaviran'ny fampiakarana mba hanatsarana ny hafainganam-pandehan'ny milina manontolo.
2. Ny ampahany dia voapetaka amin'ny tanany varahina graphite mba hampitomboana ny fanosotra, hampihenana ny abrasion ary hanitarana ny fiainan'ny serivisy.Ankoatr'izay, ny tanany varahina graphite dia tena mahatohitra ny tsindry, izay miantoka ny famehezana ny efitrano fanodinkodinana sy ny efitrano banga.
Elektrônika magnetika pre-manenjana fitaovana
1. Amin'ny fampiasana brake electromagnetic, ny frein dia miorina tsara ary ny hery dia mitovy, misoroka ny fisehoan-javatra ny fiketronana sy ny fikororohana ny vokatra fonosana.
2. Ny fampisehoana nomerika dia mampiseho fa ny hery manenjana dia azo amboarina.Ny lakile dia azo amboarina mora sy intuitively araka ny hateviny, ny flexibilité ary ny halemem-panahin'ny sarimihetsika fonosana mba hahazoana vokatra tsara indrindra amin'ny fonosana.
1. Ny rafitra fanaraha-maso manan-tsaina dia manaiky ny marika alemà Siemens mitovy, ary ny teboka fanaraha-maso dia mamaly sy miara-miasa.Aseho eo amin'ny efijerin'ny ordinatera ny mari-pana, ny fotoana, ary ny fanerena banga isaky ny ampahany, ary manana ny asany izy io mba hamantarana ny fahadisoana.
2. Mampiasa motera servo avo lenta avo lenta sy mpamily alemana Siemens, ny fametrahana ny rojo dia marina ary mihazakazaka haingana.
Rafitra fandidiana manan-tsaina
1. Fihetseham-pihetsiketsehana, fanaraha-maso ny programa mandeha ho azy, fampisehoana an-tsary ny sata mihazakazaka manontolo, ny fahitana mandeha ho azy ny antony tsy fahombiazana, mora ny miasa sy mitazona ny fitaovana.
2. Ny efijery fandidiana manan-tsaina sy maha-olombelona dia tsotra sy mazava kokoa.Ny mari-pamantarana tsirairay dia azo amboarina araka ny tokony ho izy araka ny vokatra samihafa, ary azo tehirizina ny mari-pamantarana fizotry ny vokatra.Mitsitsy fotoana sy ezaka ny antso iray kitihina.
Rafitra fiarovana fiarovana
1. Fizarana fampitana rehetra;ampahany misy mari-pana;Ny tapany manapaka sy mihetsiketsika dia misy fitaovana fiarovana, ary napetraka ny switch contact magnetika.Rehefa tsy eo amin'ny toerany ny fitaovana fiarovana na tsy eo amin'ny toerany ireo fitaovana fiarovana amin'ny milina tany am-boalohany, dia hijanona avy hatrany ilay milina.
2. Ny fitaovana mihitsy dia misy fitaovana fiatoana vonjy maika amin'ny toerana samihafa, mba hampitsaharana ny milina amin'ny fotoana misy loza.
3. Fady ny haninjitra tanana, tongotra, sandry ary faritra hafa amin’ny alalan’ny fanelanelanana, rehefa tsapa izany dia hijanona avy hatrany.
Rafitra fanodinana sarimihetsika fako
1. Ny fanodinana fako dia manana fitaovana fitiliana manan-tsaina, izay afaka manitsy ho azy ny hafainganam-pandehan'ny asa araka ny halavan'ny sarimihetsika fako.
2. Ny fitaovana dia tsy misy tabataba, mora ny manangona ny sarimihetsika, manana hery 150W, miasa ankolaka, mamonjy ny fanjifana herinaratra.
Mamorona sy hafanana famehezana bobongolo
Ny lasitra rehetra dia azo soloina haingana, ary ny lasitra maromaro dia azo atakalo amin'ny fitaovana iray mba hanamora ny famenoana vokatra marobe.
Multifunctional slitting rafitra
Araka ny vokatra isan-karazany, dia afaka mahatsapa boribory zorony slitting, mora mandrovitra, mihantona lavaka, serrated slitting, ankapobeny punching sy ny fampiharana hafa, ary ny hafainganan'ny fanoloana cutter dia haingana sy mora.
Fanofanana amin'ny antsipiriany:
1. Alemà Siemens Computer Programmable Logic Controller (PLC) fanaraha-maso, fidirana sy fivoahana lehibe.
2. Alemà Siemens 10-mirefy loko olombelona-milina interface tsara efijery mikasika.
3. 1.5KW Alemanina Siemens servo rafitra fanaraha-maso, hafainganam-pandeha avo sy avo-tsara tsikelikely hafainganam-pandeha.
4. TYC clamping rojo
5. Fitaovana elektrika nafarana (American Bonner color sensor, Schneider contactor & relay, switch switch, power protector, Yangming solid state relay, japoney Omron proximity switch, sns.).
6. Ny ampahany pneumatic dia mampiasa rafitra pneumatic Yadeke Valve Terminal.
7. Ny paompy banga lehibe tsy misy loto ho an'ny milina famonosana thermoforming avo lenta amin'ny tontolo iainana (Rietschle / Busch, azo atao amin'ny takian'ny mpanjifa) nafarana avy any Alemaina miaraka amin'ny fonosana tany am-boalohany, miaraka amin'ny haavon'ny vacuum ambony indrindra amin'ny 0.1 millibar.
8. Ny rafitra fanaraha-maso photoelectric nafarana sy ny sarimihetsika miloko dia azo ampiasaina mba hahazoana antoka fa marina ny toerana misy ny lamina.
9. Ny milina iray manontolo dia mampiasa 304 Stainless vy rafitra, izay manana hery avo, mafy harafesiny fanoherana ary tsy mora ny deform.
10. Ny fonon-tanana ambony sy ambany dia mampiasa karazana rafitra membrane manentana vaovao.
11. Ny famolavolana, ny famehezana ary ny fanandratana dia mampiasa rafitra fanandratana tsy miankina amin'ny pneumatic ary rafitra manidy tena.
12. Fametrahana mazava tsara eo anoloana, aoriana, havia ary havanana.
13. Transverse cutter miasa tsy miankina amin'ny tokana cutter sy ny foibe fanaraha-maso ny solosaina.
14. Misy rafitra fanodinana fako an-jorony.
15. Ny sliding sliding bearings dia mampiasa lubricating-free graphite varahina tanany.
16. Ny ampahany rehetra amin'ny famolavolana, famehezana, antsy mitsivalana ary antsy lava dia misy rafitra fiarovana fiarovana sy sarony fiarovana.
17. Ny fitaovana dia manana rafitra manaitra na fiarovana toy ny fatiantoka na ny fihodinan'ny herinaratra, ny tebiteby tafahoatra na ambany, ny fanosehana ara-mekanika, sns., izay mety ho an'ny mpandraharaha hampiasa sy hanitsy.Fiarovana fiatoana mandeha ho azy rehefa misy ny tsy fahombiazana ary asehoy ny mombamomba ny fahadisoana sy ny fitsaboana mifanaraka amin'ny tsy fahombiazana eo amin'ny solosaina.
teo aloha: Air energy intelligent drying line
Manaraka: milina fanasan-damba vortex miolakolaka
milina famonosana banga ara-barotra
milina famonosana banga indostrialy
Milina famonosana hena
Hena Vacuum Fonosana Machine
Vacuum Machine ho an'ny fonosana sakafo
Vidin'ny milina famonosana banga